Maitiro ekugadzirisa Apple TV kubata vhoriyamu uye simba pane yako terevhizheni | IPhone nhau
Maitiro ekuisa Apple TV kubata vhoriyamu uye simba pane yako TV
El zvirokwazvo yakagadziridza kure kure Siri inosanganisira yechina chizvarwa cheApple TV inosanganisira mabhatani akazvipira ekudzora vhoriyamu, iyo inogona zvakare kugadzirirwa ku kudzora odhiyo pamwero paterevhizheni uye nevamwe vanogamuchira ne infrared.
Kune vashandisi vane zvakajairika materevhizheni, vashandisi vanogona kumisikidza iyo Apple TV remote control kuti ishandiswe dzora huwandu hweTV. Ichi chimiro chakagadziridzwa muApple TV menyu, ichivhura iyo "Zvirongwa" sarudzo kubva pane-skrini menyu uye zvichizotevera kuwana sarudzo "Remotes> Kudzora Vhoriyamu". Ipapo tichawana sarudzo yatinofanira kusarudza: "Ziva mudziyo mutsva".
Nezve izvi tichagonesa chokwadi chekuti Apple TV inoziva kuwanda iyo inobata nayo remote control yedu nekuichengeta. Apple TV ichatikurudzira bata mabhatani kukwidza uye kudzikisa vhoriyamu yeTV remote control. A) Hongu ichatora infrared chiratidzo yeremote control uye inozozvigadzirisa, ichiita iyo Apple TV yekudzivirira kuremeta kuti iite kuti ienderane neTV. Mushure mekugadzira iyi gadziriso, Apple TV inozokumbira mushandisi kutumidza zita rekuti chidzivirire uye akwanise kuchiziva gare gare. Kana vhoriyamu yadzorwa, mabhatani e "plus" uye "minus" pazasi kurudyi kweiyo Apple TV remote control ichatoshanda neTV yedu, inogona kushandiswa kugadzirisa vhoriyamu yeTV.
Iko kune zvakare mukana wekushandisa imwe hurongwa. Zvakawanda uye akawanda materevhizheni uye vanogamuchira vanobvumira zvishandiso zvinobatana kwavari kuburikidza neHDMI kudzora simba pa / kure uye vhoriyamu. Iyo nyowani Apple TV inouyawo yakagadzirirwa neiyi system, inozivikanwa se HDMI-CEC. Kune avo vashandisi vane terevhizheni inoenderana, iyo gadziriso inogona kusimbiswa mukati memenu "Remote chidhiraivho> Equipment kudzora". Mune ino menyu yatawana, isu tine sarudzo yekumisa kana kudzima vhoriyamu kudzora uye kudzima kana kudzima TV.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Maitiro ekuisa Apple TV kubata vhoriyamu uye simba pane yako TV
Chenjerera Siri Remote. Inotyoka zviri nyore
WinterBoard ichagadzirisa yeIOS 9 Jailbreak